Kooxaha Dawlada Hoose ee Kormeeray Wadooyinka | RayHaber | raillynews
HomeWADADAAsphalt NewsKooxaha Dawladda Hoose ee la Fiirsaday Hababka
Kooxaha Dawladda Hoose ee la Fiirsaday Hababka
31 / 10 / 2014 Asphalt News, tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Kooxaha Hawl-dhexaadinta ee Kormeera Waddooyinka: Diyaargaroobayaasha Jariyaadka ee kormeeray waddooyinka miyiga ee miyiga la dhameeyey ka hor bilaha jiilaalka ayaa uga mahad celiyay madaxda tuulooyinka iyo xaafadaha.
Dhammaystirka wadada 42 ee xaafadda Karaköprü Kabahaydar, Duqa iyo kooxdiisa, oo baadhay shaqada degmada magaaladda xaafadda oo ay furay adeegga dadka deegaanka, waxay sameeyeen baaritaanka tayada iyo heerka wadada ee waddada. Isagoo kaashanaya shaqaalaha ku sugan berrinka iyo beeraha waddada, ayuu yiri Güvench oo sheegay in dhaqdhaqaaqyada magaalada caasimadda ay bilaabeen in ay nalalkooda la soo baxaan.
Guvenc ayaa sheegay in ay bilaabeen shaqada wadooyinka kooxda oo ay dhamaystireen kooxaha Shaqada Sayniska oo leh xawaare aad u fiican isla markaana yiri, "Waxaan sameynay asphalting ee wadada kooxda 420 Km Rural Neighborhood Road. Waxaan sameynay hindise cusub. Dhammaantood waxay bilaabeen wax yar ka dib. Marka laga soo tago, ka dib markii 30 Maarso, waxaan bilaabnay inaanu gaarno gawaarideena gaar ahaan tuulooyinka iyo kooxaha Metropolitan. Guud ahaan, waxaan dhameeyeen xaafadaha 220 km wadada agagaarkeeda. Waxaan halkan u imid si aan u booqano jidkii 42 ee ay kooxahii Hawlaha Shaqadu dhammaysteen oo aan eegnay heerarka.
Safit, oo u mahad celiyay Kooxaha Metropolitan Municipality iyo dadka maxaliga ah ee taageersan shaqada, ayaa yiri, "Waxaan rajeyneynaa inaanu sameyno waddooyin fiican oo waliba waxaan leenahay walaalayaal rusheeyaa. Waxaan leenahay walaalayaal leh rajo aad u weyn; laakiin waa inay ogaadaan in Sanliurfa, oo mas'uul ka ah Metropolitan 10 Metropolitan 220 in ka badan kun jidka tuulada. Waxaan isku dayeynaa inaan sidan ku sii wadno. Waxaanan dhisi doonnaa kaliya wadooyinka 420 km iyo 1000 km, laakiin waxay sidoo kale samaysay waddo xasilan oo u dhaw XNUMX Km. Intaa waxaa dheer, waxaan samaynay asfalt kulul iyo dayactir iyo nadaafada xayawaanka. "
Safch, "Waxaan u Daaweynaa Dadkeena Wadooyinka Weynaan Karno Qeybta Qorsheeynta Wadada 2014"
Safiirka oo ka hadlay murugada uu ku hayo waddooyinka aan la dhisi karin sanadka 2014, ayaa raali galin ka bixiyay shacabka waxaana yiri, "qarnigan, waddada iyo biyaha waa in aan la hadlin. Waxaanu ku faraxsannahay magaca dadkeenna haddii aan ka daahno goobaha aan qabano. Dadkayagu waa u qalmaan adeegga ugu fiican, waxaan ku faraxsanay carruurta, haweenka iyo dadkeena. Waan ku faraxsanahay inaan qabano shaqadeena. Waxaan rajeynayaa inaan si wada jir ah u wada shaqeyn doono. Taas awgeed, waa in ay jirtaa nabad iyo waxaan u baahannahay in aan isku xirno, taageerno oo aan is jeclaanno. Waxaan xallin doonnaa dhammaan dhibaatooyinka dadkeena waana sii wadi doonaa inaan xallino sidii ay u fiicnaan laheyd. "
Modanli, "Dhibaatada Wadada ee Sannadleedka Dhamaysta"
Seydi Modanli, madaxa tuulada Kalin Beyatli, oo sheegay in ay jiraan dhibaatooyin waddooyin ah oo sanado ah, ayaa yiri, "Wadada 36 ee wadada ayaa sidan oo kale ah sanadahan. Sanadkii la soo dhaafay dhamaan asfaltka ayaa laga saaray laakiin aan la sameyn. Waan niyad jabnay. Iyadoo shaqadayada joogtada ah, waxaan u nimid marxaladan waqti gaaban. Waxaa si dhab ah loo sameeyey qaabkeena hab quruxsan. Ugu horeyntii, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada caasimadda, Mehmet Emin Özçınar, Mehmet Emin Yeşiltaş iyo qof kasta oo ka qayb qaatay waddada
Cetin, Wadooyinka Wadooyinka waa la dhammeeyaa oo aan lahayn jiilaal "
Duqa degmada Seven Wells, Mehmet Çetin, ayaa yiri, "Wadada waa mid naga mid ah, waxaannu isticmaalnaa wadada 12 kilomitir koox oo waxaan ku xirnaa Hilwan. Wadooyinka waa la dhammeeyey ka hor xilliga qaboobaha. Dhibaatooyin badan ayaa nala soo kulmay sannadkii hore, laakiin waxay u qalantay. Waad ku mahadsan tahay "
Guvenc waxay la kulmeen tafaftirayaal ku yaal Bozova
Dhinaca kale, Madaxweynaha iyo kooxdiisa ayaa u socdaalay magaalada Bozova, ururka Bozova AK Party oo booqday, qiimeynta shaqada loo qabtay si loo xalliyo dhibaatooyinka la ogaaday una qabtay shir gaaban. Guvenc, ka dib markii uu kulanku la yimid shaqaalaha farshaxanimada iyo muwaadiniinta, caasimadda ayaa dhageysanaya sheekooyinka koowaad ee afkiisa. Guvenc wuxuu dhageystay baahida dadka, wuxuu bilaabay daraasado si loo fuliyo dalabaadka.
Kooxaha Gawaarida waxay bilaabayaan Shaqada Qaxootiga
Kooxaha gaadiidka ee Kayseri ayaa kordhay kantarool
Hawlaha Wadooyinka ee Malkaraaga Shaqooyinka Bilaabidda Shaqada
Kooxaha Booliska ee Dawladda Hoose ee Kormeerka Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir
Kooxaha Magaalooyinka Manisa waxay u shaqeeyaan Badbaadada Gaadiidka
Guddoomiyaha Nooca Dhiigga iyo Jilidda Asphalt
Gudoomiye Gobleedu wuxuu laalaadiyaa Shaqooyinka Asphalt
Waxay fulisay rabitaankeeda ninkeeda iyadoo dhisaysa buundo
Asfalt jidadka Sason